bk joined SoeThi's groupNetwork and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)System Engineer, Maintenance and System Administrator, Network Engineer, Network Administrator, Backup Engineer, etc ......See MoreNov 15 56
pyephyoeaung and aung joined SoeThi's groupNetwork and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)System Engineer, Maintenance and System Administrator, Network Engineer, Network Administrator, Backup Engineer, etc ......See MoreOct 8 56
Sai Naing Win joined SoeThi's groupNetwork and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)System Engineer, Maintenance and System Administrator, Network Engineer, Network Administrator, Backup Engineer, etc ......See MoreOct756
mmmoe joined SoeThi's groupNetwork and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)System Engineer, Maintenance and System Administrator, Network Engineer, Network Administrator, Backup Engineer, etc ......See MoreSep556
Babagyi Krato joined SoeThi's groupNetwork and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)System Engineer, Maintenance and System Administrator, Network Engineer, Network Administrator, Backup Engineer, etc ......See MoreSep456
SoeThi updated their profileJul 17SoeThi commented on SoeThi's group Network and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)"တလောက ပြသနာ တစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ် စဖြစ်တာက HDD ပြသနာက စတာ၊ Dell Server R410 Model ပါ။ 300GB SAS သုံးလုံးကို Raid5လုပ်ထားပါတယ်၊ အဲ့ဒီထဲက တစ်လုံးက ပျက်တော့ HDD ကိုမလဲဘဲ user က HDD ကိုမလဲဘဲ RAID Controller ကိုလဲလိုက်တယ်တဲ့၊ အဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးကောင်း နေတယ်…"Jul 16SoeThi addedadiscussion to the group Network and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)Introduction for Virtualizationဒီနေ့တော့ Virtualization Technoogy နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် ဒီလောကထဲကို ရောက်နေ့တဲ့သူတွေကော လက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေ လေ့လာဆဲ လေ့လာနေတဲ့ သူတွေ အကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကိုစိုးသီ အဓိကလုပ်နေတာရယ် နောက်ပိုင်း လုပ်မဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ လေ့လာမဲ့ နည်းပညာထဲမှာ ဒီတစ်ခုက အခရာ ကျလာပြီလို့ဆိုရမယ်။ server, storage, network and virtualization တွေက နောက်ပိုင်းမှာ ခွဲခြားမရဘဲ တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်လာကြပြီဒါကြောင့် storage engineerand virtualization engineer တွေက အရေးပါတဲ့…See MoreJul 16 0
SoeThi commented on SoeThi's group Network and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)"အားလုံးဘဲ မတွေ့တာလဲကြာပြီ စာတွေ မရေးဖြစ်တာလဲ ကြာပြီ နည်းနည်းခြင်းတော့ ပြန်ရေးသွားဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျတော် နောက်ပိုင်ရေးမဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အတွေ့ ကြုံနဲ့ သတိပြုဖတ်မိတာလေးတွေကို ဒီမှာ နည်းနည်းခြင်းရေးသွားပါ့မယ် ကဲ အားလုံးဘဲ…"Jul 16SoeThi replied to nandakyawswar1's discussion သူငယ္ခ်င္းမ်ားကူညီေပးပါအုံး Server ထဲက Data ဖ်က္သြားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Source ကိုသိခ်င္လို႔ပါ"Please set configuration in following link for future protection.
http://sogeeky.blogspot.sg/2006/07/how-to-audit-and-track-file-deletions.html"Jun 28aung phyo wai joined SoeThi's groupNetwork and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)System Engineer, Maintenance and System Administrator, Network Engineer, Network Administrator, Backup Engineer, etc ......See MoreMay 10 56
"Apr 4SoeThi replied to hanlin's discussion ကူညီပါ"I would to advice, the fedora ISO need to be re-burn and try again. I am not too sure but I facing this problem like before.
"Mar 31IT ညီငယ္ joined SoeThi's groupNetwork and System Engineers (စက္ျပင္သမားမ်ား အဖြဲ႕)System Engineer, Maintenance and System Administrator, Network Engineer, Network Administrator, Backup Engineer, etc ......See MoreMar 11 56
SoeThi replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"Bro, so sorry for bad news, now everything is ok? :("Jan 28SoeThi replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"Bro, really this case was happen ?????"Jan 28 More... RSS
MCP, CCNA, Specialist Diploma in Network Security (Singapore Polytechnic), Acronis Certified Engineer, Acronis Certified Sales Specialist